UGiuseppe Garibaldi, iHarter Revolutionary Hero
I-Hero Revolutionary Hero
UGiuseppe Garibaldi wayengumkhokeli wenkokeli oholele intlangano eyadibanisa i-Italy phakathi ne-1800. Wayechasene nokucinezelwa kwabantu baseItali, kwaye izimo zakhe zenguquko zaphefumlela abantu kumacala omabini ase-Atlantiki.
Wahlala ubomi obunomdla, obandakanya iziqu ezifana nomlobi, umkhombe, kunye nesoldati. Yaye imisebenzi yakhe yamholela ekuthunjweni, oku kuthetha ukuhlala ixesha eMzantsi Melika kwaye, nakwinye, eNew York.
UGiuseppe Garibaldi wazalelwa e-Nice ngoJulayi 4, 1807. Uyise wayengumlobi kunye nokuqhutyelwa kweenqanawa zokurhweba kwiNxweme yeMedithera.
Xa uGaribaldi wayesengumntwana, iNice, eyayilawulwa yi-Napoleonic France, yaba phantsi kolawulo lwase-Italy lwasePiedmont Sardinia. Kungenzeka ukuba umnqweno omkhulu kaGaribaldi wokudibanisa iItaly wawugxilwe kumava akhe ebuntwaneni ngokubona ukuba ubuzwe belizwe lakubo buyatshintshwa.
Ukumelana nesifiso sikanina sokuba ajoyine ububingeleli, uGaribaldi waya elwandle eneminyaka eyi-15.
Ukusuka kuLwandle lweKaputeni ukuya kwiNgqumbo noFugitive
UGaribaldi uqinisekisiwe njengomphathi wamanxweme eneminyaka eyi-25 ubudala, kwaye ekuqaleni kwee- 1830 waza wabandakanyeka kwi ntshukumo e-"Young Young" ekhokelwa nguGiuseppe Mazzini. Iqela lazinikela ekukhululeni nasekuhlanganisweni kweItali, iinxalenye ezinkulu zaye zalawulwa yi-Austria okanye iPapa.
Iqhinga lokuphanga urhulumente wasePiedmont uhlulekile, kwaye uGaribaldi, owayebandakanyekile, waphoqeleka ukuba abaleke.
Urhulumente wamgweba ukuba afe ngenxa yokungabikho. Ayikwazi ukubuyela e-Italy, waya eMzantsi Melika.
Guerrilla Fighter kunye noMvukelo eMzantsi Melika
Kwiminyaka engaphezu kwe-12 uGaribaldi wayehlala ekuthunjweni, enze okokuqala njengomkhumbi kunye nomthengisi. Wathandwa ukuvukela eMzantsi Melika, kwaye walwa eBrazil nase-Uruguay.
I-Garibaldi iholele imikhosi eyayinqoba umlawuli we-Uruguay, kwaye wayedityaniswa ngokuqinisekisa ukukhululwa kwe-Uruguay.
Ukubonakalisa ingqiqo ebonakalayo, uGaribaldi yamkela iikhati ebomvu ezigqithwe yi-South American gauchos njengento yokuthengisa. Kwiminyaka kamva iimfesi zakhe ezibomvu ziza kuba yinxalenye ebalulekileyo yomfanekiso wakhe.
Ngoxa uGaribaldi wayehlala eMzantsi Melika wahlala edibanisa nomngane wakhe waseMazzini, owahlala e-London. I-Mazzini yayiphakamisa uGaribaldi, imbona njengento yokubambisana kweeNtaliyane.
Njengoko iinguqulelo zaqhambuka eYurophu ngo-1848, uGaribaldi wabuya esuka eMzantsi Melika. Waya e-Nice, kunye "neLegionary Legion" yakhe, eyayinamaqela angama-60 apheliweyo.
Njengoko imfazwe kunye nokuvukela kwe-Italy, uGaribaldi wayala amabutho eMilan ngaphambi kokuba abaleke eSwitzerland.
I-Hailed njenge-Hero Hero ye-Italy
UGaribaldi wayehlose ukuya eSicily, ukuba ahlangane nomvukelo apho, kodwa wakhankanywa kwingxabano eRoma. Ngomnyaka we-1849 uGaribaldi, ethatha icala lombuso onguyisandul 'ukuvuselelwa, wahola amabutho aseItaliya alwa namaqela aseFransi ayenyanisekile kuPapa. Emva kokubamba iindibano zamaRoma emva kwemfazwe enobuqhetseba, ngelixa bephethe ikrele eligazini, uGaribaldi wakhuthazwa ukuba abaleke esi sixeko.
Umfazi owazalwa ngo-Garibaldi waseMerika wase-Amerika, u-Anita, owayesilwa kunye naye, wafa ngexesha lokubuyela eRoma. UGaribaldi ngokwakhe wasinda waya eTuscany, kwaye ekugqibeleni waya kuNice.
Ukuthunjwa kwiStenen Island
Amagunya aseNice amnyanzela ukuba abuyele ekuthinjweni, kwaye wawela i-Atlantic kwakhona. Ngethuba elithile wayehlala ngokuthula eKitenen Island, kwisiqithi saseNew York City , njengendwendwe yoMsunguli wase-Italiya waseMelika uAntonio Meucci.
Ngasekuqaleni kwe- 1850 uGaribaldi ubuyele kwinqwelo yokuhamba elwandle, ngelo xesha ekhonza njengomphathi we nqanawa eya ePacific nasemva.
Phakathi no-1850 uGaribaldi waya e-Mazzini eLondon, ekugqibeleni wavunyelwa ukuba abuyele e-Italy. Wakwazi ukufumana iimali zokuthenga i-estate kwisiqithi esincinane eselunxwemeni lwaseSardinia, kwaye wazinikela ekulimeni.
Akunakude kude nengqondo yakhe, ngokuqinisekileyo, yayiyintlangano yezopolitiko ekuhlanganiseni u-Italy.
Le ntshukumo yayibizwa ngokuba yi- risorgimento , ngokoqobo "uvuko" ngesiNtaliyane.
"Amawaka aMawaka Alubomvu"
Ukuguquka kwezombusazwe kwakhona kwaholela uGaribaldi ekulweni. Ngomhla ka-Meyi 1860 waya eSicily kunye nabalandeli bakhe, abazaziwa ngokuba "amawaka ayingqumbo." UGaribaldi wanqoba amaqela aseNapolitan, ngokugqithiseleyo anqobe isiqithi, waza wawela i-Straits of Messina kwilizwe laseNtaliyane.
Emva kokuhambelana nenyakatho, uGaribaldi wafikelela eNaples waza wangena kwisixeko esingakhankanyiweyo ngoSeptemba 7, 1860. Wazibiza ngokuba ngumtyholi. Ukufuna ukuhlanganiswa kokuthula kwe-Italy, uGaribaldi waphenduka ekunqobeni kwakhe kwelaseKumkani wasePiedmont, waza wabuyela kwisiqithi sakhe esiqithi.
Ukuhlanganiswa kokugqibela kwe-Italy kuthatha ngaphezu kweminyaka elishumi. UGaribaldi wenza iinzame eziliqela zokubamba iRoma ngowe- 1860s , kwaye wabanjwa kathathu waza wabuyela efama lakhe. KwiMfazwe yaseFranco-Prussian, uGaribaldi, ngenxa yesihawu kwiRiphabhlikhi yaseFransi esandul 'utsha, walwa ngokufutshane namaPrussia.
Ngenxa yempuphu yaseFranco-Prussian, urhulumente waseItali wathintela iRoma, kwaye i-Italy yayinyaniswe. UGaribaldi ekugqibeleni wavotela ipenshini nguRhulumente waseTaliyane, kwaye wayebhekwa njengegorha yelizwe kuze kube sekufeni kwakhe ngoJuni 2, 1882.
I-Rogers State University Admissions
I-TStream Class eDelphi
Ukuphazamiseka Okukhulu Kwengqondo (SED)
Ukukhulisa nokunyamekela isiqhamo sakho somgubo (i-Old Man's Beard)
Olupheleleyo u-John Grisham Book List